5 Most Charming Old City Centres In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > 5 Most Charming Old City Centres In Europe
Iyo inofadza guta rekare nzvimbo muEurope muenzaniso wakanaka wesimba renhoroondo yeEurope. Dzimba diki diki, makedhedhi anoyevedza pakati peguta, dzimba dzeumambo dzakachengetedzwa zvakanaka, uye nzvimbo dzepakati wedzera kune mashiripiti emaguta eEurope. ari 5 mazhinji anofadza maguta ekare muEurope akaramba akasimba kwemazana emakore.
Mavara, akitekicha, uye ngano dzinoramba dzichigara uye dzakamira mumaguta ese. Kubva kuPrague kuenda kuColmar, Nzvimbo dzekare dzeguta dzeEurope dzakakodzera zvachose kushanya kwako, uye kanenge kamwe kupera kwevhiki.
1. Prague Old Guta Center, Czech Republic
Guta rinoyevedza rekare muPrague rakanaka kwazvo. Guta repakati square rakakura kwazvo, nemabistros akanaka, cafes, uye matengesi emusika wezvokudya. Iyo mraba inzvimbo yakakwana yekutarisa vanhu, kuravira Czech doro, uye sosiji dzakachekwa apo vakamirira iyo astronomic wachi show. Zvinonyanya kukoshesa nzvimbo yeguta rekare ndeye, ehe saizvozvo, iyo nyeredzi shongwe. Saka usashamisike paunoona mhomho yevashanyi ichiungana pachivara nguva yega yega yekutenderera.
Chinhu chakasarudzika cheyekunaka guta rekare muPrague zvivakwa zvine mavara. Baroque maitiro chechi St.. Nicholas uye chechi yegothic yezana ramakore regumi nemana yaWedu Mukadzi pamberi peTyn, hazvifaniri kushaikwa. Guta rekare riri muPrague zvakare ndimo mune iyo Musika weKisimusi unoitika, uye inofadza guta pakati inoshanduka kuita inoshamisa ngano.
Guta rinoyevedza rekare muSalzburg rakanakisa uye rakasarudzika. Kusanganiswa kwekuvakwa kweItaly neGerman, Pakati pezera kusvika kuma19-century masitaera, gadzira imwe yenzvimbo dzinoyevedza dzemaguta muEurope. Salzburg, inozivikanwawo seAltstadt ndeye UNESCO nhaka nyika saiti uye rwendo rwakanaka rwezuva-kubva kuVienna, svikika nechitima.
Mwoyo weguta rekare muSalzburg ndiyo imba yekare yemuchinda, iyo Residenz Nyika ye 180 makamuri. Iyo Residenz square ndipo paunogona kunakirwa nemusika wakanaka weKisimusi weZalsburg, uye rarama mimhanzi makonzati. wo, ita chokwadi chekudzungaira uchitenderera nzvimbo yekare yeguta, kune Residenz tsime, Musha wehudiki hweMozart, uye Salzburg Cathedral.
Guta reSalzburg riri kuchamhembe kweAlpes, nemipendero, uye dzimba kumashure. Rwizi runoyambuka rimwe remaguta ekare akachengetedzwa kwazvo muEurope ichiwedzera post-kadhi maonero.
3. Bruges Old City Center, Bherujiyamu
Brugge, kana sekuziva kwedu tese maBruges, ndiro rimwe guta rinoshamisa rine inofadza guta rekare. Imwe imba yevaViking, nhasi ndizvo imwe yematombo akavanzika eEurope. kushandiswa’ nzira nhete uye cobblestone migwagwa, dzimba dzine mavara, uye migero inoita kuti ive nzvimbo yeUNESCO nhaka.
Paunofamba-famba uchitenderera nzvimbo yeguta rekare muBruges, iwe uchaona zvitoro zvidiki izvo zvinopa yakanaka lace. kushandiswa’ lace ine mukurumbira kutenderera pasirese, saka kuwedzera pakuunza mifananidzo yakanaka, lace ichave chiyeuchidzo chinoshamisa chaunogona kuunza kubva kuBruges.
Bruges inowanikwa nekutakura kwevanhu kubva kuBrussels, uye iwe unogona kuongorora guta nekutakura, netsoka, kana chikepe tasva. Iyo Markt inzvimbo huru yekutanga rwendo rwako kuburikidza nemazera, uye enderera kune inoshamisa Belfry yeBruges, uye Chechi yeMukadzi Wedu Bruges. Kana iwe uchida kuyemura inonakidza yekare guta repakati kubva kumusoro, ipapo iyo Belfry tower inopa yakasarudzika maonero.
Amsterdam kuBruges Chitima Mitengo
Brussels kuenda kuBruges Chitima Mitengo
Antwerp kune Bruges Chitima Mitengo
Ghent kuenda kuBruges Chitima Mitengo
4. Colmar, Furanzi
Iyo inoyevedza yekare guta pakati peColmar ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa dzekushanyira muAlsace. Guta rekare nderimwe remaguta ekare akachengetedzwa muEurope. Dzimba’ mahedheni akachengetedza yavo kadhi-senge chishongo uye runako kubva kuma medieval times, uye iwe unogona kuona epakutanga maRenaissance maficha mune yekupisa maficha.
Colmar yakakomberedzwa neminda yemizambiringa, uye hunhu kunzvimbo dzekare dzetaundi, iwe uchawana kereke yakanaka Saint-Martin. Chimwe chinhu chausingapotse iVenice diki muColmar, kwaunowana maresitorendi anodakadza, mabhiriji, uye migero yekuongorora.
Kune zvakawanda zvekugara sarudzo muguta diki reColmar, asi iwe unogona zvakare kunakidzwa neguta rekare riri muColmar, on a day-trip from Strasburg. The wonderful vineyards are the perfect excuse for a French kuputsa guta uye vhiki kupera.
Paris kuenda kuColmar Chitima Mitengo
Zurich kuColmar Chitima Mitengo
Stuttgart kuColmar Chitima Mitengo
5. Florence Old Guta Center, Itari
Duomo weFlorence, neshongwe yayo neCathedral, kutonga guta rekare pakati muFlorence mune runako, ukuru, uye runako. Guta rekare reFlorence nderimwe re 5 inonyanya kufadza uye inoshamisa inoshamisa muEurope. Yako yekutangira kune ino UNESCO yepasirese saiti saiti inotanga Piazza del Duomo kuenda kuPazza Della Signoria.
Kana iwe uchida kutsvaga zvimwe zveFlorence, ipapo unofanirwa kuenderera kuUffizi Gallery uye Boboli Gardens. Iko hakuna imwe nzira iri nani yekudzidza nezvenhoroondo uye tsika yeguta pamusoro pemazana emakore kupfuura kuburikidza nehunyanzvi. Florence iguta rakanaka reItari, kwaunogona kubata panini, kunze chaiko kweDuomo. Kana uine nguva, ndokukwira kumusoro kweDuomo, nokuti mukare maonero yeimwe remaguta akanaka kwazvo muItari.
Guta rekare reFlorence riri zuva-rwendo kubva kuVenice. zvisinei, iwe unofanirwa kutsaurira zvirinani 2 mazuva akazara ekutsvaga masosi uye zvigadzirwa zveFlorence.
Kana iwe uchida kudzokera kumashure munguva yeku medieval era ne Renaissance, zvadaro izvi 5 ekare maguta nzvimbo muEurope ndiwo akakodzera mafambiro. pano pa Save A Train, isu tichafara kukubatsira kuronga rwendo rwako kune aya anonyanya kunakidza maguta echitima nechitima.
Iwe unoda here kupinza yedu blog positi "5 Akanyanya Kunaka Nzvimbo Dhorobha Guta MuEurope" kupinda yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcharming-old-city-centers-europe%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
citycenter Fairytaletown oldcitycenter OldcitycentersEurope Train Travel TravelColmar travelflorence TravelPrague TravelSalzburg